Ixesha kunye nabahlobo 45
Yintoni efunekayo ukuze uKhuleko kuZinikele?
Ukucinga ngendlela efanelekileyo yokusebenzela loo nto uzinikele kuyo, kwaye uyisebenzele.
Ukuzinikela sisimo okanye isakheko sengqondo kumgaqo, unobangela, ukuba ngumntu okanye ukulungela ukwenza into ethile kuloo nto athe wazinikezela kuyo. Ukukhula kokuzinikela kuxhomekeke kumthamo omnye wokukwenza, wokusebenza, kunye nomthamo unyuswa ngokusebenza ngobukrelekrele. Uhlobo lokuzinikela lunyanzela umntu ukuba abonise ukuzinikela kwakhe ngokwenza into ebonakalisa ukuzinikela kwakhe. Olu nyanzeliso lokuzinikela alusoloko luvelisa ezona ziphumo zihle, kodwa, nangona injongo ingeyiyo eyona ifanelekileyo, into eyenziweyo inokuba kukonakalisa oko kwenzelwe kuyo.
Iimpawu zokwenza izinto zisuka entliziyweni. Esi senzo esisuka entliziyweni, nangona sisiqalo esifanelekileyo, asonelanga kukhula lokwenyani. Ulwazi luyimfuneko kwisenzo sobulumko. Indoda enesimo sokuhlonela idla ngokuphula ingcaciso ngaphambi kokuthatha isenzo, kodwa ikhetha ukulandela oko kutshutshiswayo. Kodwa, kungokusebenza kwengqondo kuphela olunokufunyanwa. Oluvavanyo lokwenene lokuzinikela komntu kukufunda, ukucinga, ukusebenza ngengqondo ngokubhekisele kwezona zilangazelelo zakhe Ukuba umntu ubuyela kwisenzo seemvakalelo kwaye asilele ukucinga ngomonde nangokuzingisa, ke akanalo uzinzo lokwenyani. Ukuba umntu onobunjani bokuzinikela azingisa ekusebenziseni ingqondo yakhe aze ke afumane amandla okucinga ngokucacileyo uya kongeza ulwazi ekuzinikeleni kwakhe nakwisikhundla sakhe sokunikela kuloo nto azinikele kuyo iya kwanda.
Luhlobo luni lweziSenzi, kwaye lixesha elingakanani lisetyenziswa?
Uhlobo lwempepho ungowomhlaba. Umhlaba, njengenye yezinto ezine, uhambelana nengqondo yokubetha. Isiqhumiso ngumxube onukayo weentsini, iziqholo, ioyile, i-resins, iinkuni ezithi xa zitshisa zikhuphe ivumba elithandekayo kumsi wazo.
Isiqhumiso sasisetyenziswa ngaphambi kokuba umntu aqale ukurekhoda amaziko, amasiko kunye nemisitho. Izibhalo ezininzi zithetha ngesiqhumiso njengento eyimfuneko kwizenzo zonqulo. Iziqhumiso zazisenziwa kwimibingelelo yedini kunye nangomnikelo, ubungqina bokuzinikela komntu othembekileyo kunye nomnquliyo, kwinto ebinquliweyo. Kwizibhalo ezininzi ukunikela ngesiqhumiso njengesenzo sonqulo kuchazwa ngobude obukhulu, kunye nemithetho enikiweyo yohlobo lwesiqhumiso oluya kusetyenziswa, ukulungiswa kwalo kunye nokutsha.
Ngaba zikhona ezinye izibonelelo ezifunyenwe kukutsha kwesiqhumiso, ngexesha lokucamngca?
Izibonelelo ezinokubakho ngokutshiswa kwesiqhumiso ngexesha lokucamngca, ngokunxulumene nehlabathi lomzimba kunye ne-astral. Ukutshiswa kweziqhumiso akuyi kufikelela ngaphaya kwe-astral okanye i-psychic world. Ukutshiswa kwesiqhumiso akunakunceda ukucamngca ngezihloko eziphathelele kwizinto zokomoya okanye zokomoya.
Ukuba umntu uthethelela umoya omkhulu womhlaba kunye nemimoya engaphantsi komhlaba, okanye nasiphina isidalwa sehlabathi se-astral, unokufumana izibonelelo ngokutshiswa kwesiqhumiso. Ufumana izibonelelo ngezibonelelo ezinikiweyo. Umhlaba unika ukutya okondla umntu ngokwasemzimbeni. Iinyani zayo zikwondla izidalwa zomhlaba kunye nezidalwa zehlabathi ze-astral. Ukutshisa isiqhumiso kukhonza injongo ephindwe kabini. Inomtsalane kwaye imisele unxibelelwano kunye nezinto ezinqwenelekayo, kwaye iyazicekisa ezinye izinto ezingafakwanga sesiqhumiso. Ukuba umntu unqwenela ubukho beempembelelo ezithile, ke ukutshiswa kwesiqhumiso kunokunceda ekutsaleni ezi mpembelelo kunye nasekusekeni i-rapport. Nangona kunjalo, ukuba umntu akabazi ubunjani besiqhumiso awayeza kusisebenzisa kwaye akabazi uhlobo lohlobo lwempembelelo okanye into ayifunayo, unokufumana endaweni yeenzuzo, ezingathandekiyo nezinobungozi. Oku kusebenza kukucamngca ngokubhekisele kwizinto zehlabathi ezibonakalayo kunye nezobuntlola, kunye nezinto ezinqabisayo.
Ukucingisisa nzulu ngezifundo zehlabathi kunye nokomoya, ukutshisa isiqhumiso akuyimfuneko. Ingcinga kunye nesimo sengqondo sakhe sisodwa sithatha isigqibo sokuba yeyiphi na impembelelo eza kubakho kwaye zeziphi izinto ezihamba kunye nokucamngca kwengqondo nangokomoya. Ukutshiswa kwesiqhumiso kuhlala kugcina ingqondo kwizinto ezithandekayo kwaye kuyithintela ekungeneni kwimeko yokuthontelana eyimfuneko yokucamngca ngokunxulumene neengqondo zokomoya kunye nezezokomoya.
Ngaba iZiphumo zokutshiswa kwesiqhumiso ziyajongwa nakweyiphi na yeziCwangciso?
Bazi. Kuxhomekeka kumandla opharetha ulwazi analo ngesihloko sakhe, ezibonakalayo kunye nezinye iziphumo ezinomdla ziya kubonakala. Umsi kunye nomsi ophuma kwiziqhumiso unika amandla kunye nezinto ezibonakalayo apho izinto ezinqwenelekayo nezicelwayo zinokuvela. Esi sesinye sezizathu zokuba amagqwirha kunye necromancers basebenzise isiqhumiso kwizibongozo zabo kunye nezihlanganisi. Ngokutshiswa kweziqhumiso kuveliswa kwezinye iiplani kunokwasemzimbeni, kodwa umntu kufuneka abe nemvakalelo yokusebenza kwengqondo eqeqeshwayo kwaye iphantsi kolawulo lwengqondo yakhe ukuze azibone. Emva koko uya kubona ukuba wazi njani kwaye kutheni kutheni iimpembelelo kunye nezilwanyana zinomdla okanye zichasene nokutshiswa kwesiqhumiso, indlela ezichaphazela ngayo lowo ubeka isiqhumiso, kunye nezinye iziphumo zokutshiswa kwesiqhumiso